Ahoana ny fampiasana ny zoom-H6 anao ho toy ny Audio Interface mankany amin'ny Mevo | Martech Zone
Alakamisy, Jolay 25, 2019 Alakamisy, Jolay 25, 2019 Douglas Karr
Indraindray ny tsy fahampian'ny antontan-taratasy amin'ny tranokala dia tena mahasosotra ary mitaky fitsapana sy hadisoana taonina alohan'ny ahitanao zavatra mandeha tsara. Iray amin'ireo mpanjifako ny ivon-toerana lehibe indrindra any afovoany andrefana ary izy ireo no mitarika ny firenena amin'ny fanamarinana. Na dia manosika ny atiny indraindray aza izahay dia te hanitatra ny fahaizan'izy ireo hahafahan'izy ireo manome lanja bebe kokoa an'ireo prospect sy mpanjifa amin'ny alàlan'ny fitaovana hafa.
Ny fandefasana mivantana ny fanazavana vitsivitsy momba ny lalàna vaovao, ny fanadinadinana ireo matihanina amin'ny indostria, na ny fanomezana torohevitra fanarahana na fiarovana fotsiny indraindray dia mety ho tena sarobidy. Noho izany, nanampy azy ireo aho nanangana studio handefasana podcast, handraisana horonantsary ary streaming mivantana.
Manana efitrano fivoriana lehibe izy ireo izay nanasarako faritra iray ary niaro azy ireo tamin'ny ambainy audio mba hampihena ny akoako. Nanapa-kevitra ny handeha miaraka amina fanamboarana semi-portable a Mevo fakan-tsary mivantana, dia Zoom H6 recorder, ary tsy misy tariby mikraoba lavalier Shure. Midika izany fa afaka nametraka faritra tsy voatanisa aho handraketana - avy amin'ny latabatra ka hatramin'ny faritra nipetrahana ary izay rehetra eo anelanelany.
Mazava ho azy, raha vantany vao azoko ny fitaovana rehetra dia rehefa sendra olana aho. Ny rafitra Zoom H6 sy Shure dia miasa tsy misy kilema, saingy nanana fotoana kely aho nanandrana namantatra ny fomba fampiasana ny Zoom H6 ho toy ny interface audio mankany amin'ny Mevo.
Zoom H6 sy Mevo Boost
Fanamarihana iray momba izany dia ny tena tianao hampiasa ny Mevo Boost, izay ahitanao ny fahaizana mifandray amin'ny tamba-jotra ho an'ny streaming, ary koa ny USB ho an'ny audio, ary samy manana herinaratra sy bateria mitatra. Notsapaiko tamin'ny rafitra fomba am-polony maro ny rafitra… manandrana manangona vaovao vitsivitsy avy Lahatsary voafetra an'i Mevo izay mampiseho ny Zoom H4n fa tsy ny H6… izay misy fahasamihafana lehibe.
Raha ny tena izy dia tsy dia sarotra loatra noho ny noeritreretiko:
Ampifandraiso ny Zoom H6 amin'ny Mevo Boost amin'ny alàlan'ny USB. Fanamarihana: Tsy hampandeha ny Zoom H6 (Boo!) Izany ka mila mampiasa batterie ianao.
Ahodina ny Mevo ary avy eo ny Zoom H6.
Ao amin'ny Zoom H6, mila mivezivezy amin'ny rafitry ny menio ianao ary hametraka azy ho toy ny audio interface ho an'ny firaketana marobe ho an'ny PC / Mac mampiasa herin'ny bateria.
Ireto ny efijery araka ny filaharany (aza mitandrina ny zavatra nalahatra nisongadina, nalaiko avy tao amin'ny boky torolàlana Zoom H6 ireo sary ireo).
Ampiasao ny Zoom H6 ho Audio Interface
Safidio ny Multi Track hahafahanao mampiasa ny fampiasa mikrôfôninao rehetra
ZAVA-DEHIBE: Misafidiana PC / Mac mampiasa herin'ny bateria
Ho hitanao izao ny USB ho fampidirana am-peo ao amin'ny Mevo! Tsindrio fotsiny raha te hifandray dia ho vonona handeha ianao.
Fanamarihana, ny antontan-taratasy ho an'ny Zoom H4n dia milaza fa ny famoahana feo dia tokony ho 44kHz fa tsy 48kHz. Ao amin'ny Zoom H6, tsy afaka nanova ny fahita matetika ny vokatra rehefa nampiasaina ho toy ny interface audio USB. Raha hainao ny fomba, ampahafantaro ahy! Tsara ny feo tamin'ny 48kHz ka tsy azoko antoka fa ilaina izany.
Disclosure: Nampiasa ny kaody mpampifandray an'i Amazon aho tamin'ity lahatsoratra ity.